Mitambo nemashandisirwo emahara kana kutengeswa kwenguva yakati wandei (Ndira 9) | IPhone nhau
Mitambo nemashandisirwo emahara kana kutengeswa kwenguva yakati wandei (Ndira 9)
Jose Alfocea | | IPhone maapplication
Nhasi, ndiri Svondo, machira angu akanamira uye ndinosvika nguva diki dzekare. Asi sekutaura kunoita chirevo, "hazvina kunonoka kana mufaro wakanaka" saka tichazopedza svondo rekutanga ra2017 muActualidad iPhone nenzira yatingaite, ne kusarudzwa kwemitambo yemahara uye kunyorera. Zvakanaka, sununguka izvozvi, uye kwenguva yakati rebei nekuti iwo ari chaizvo akabhadharwa maapplication ayo avo vavaki vakaisa pakutengesa.
Usakanganwa izvozvo Uku kukwidziridzwa kuri kushanda panguva yekutsikisa ichi chinyorwa, uye kuti hatigone kuvimbisa kuti vachashanda kwenguva yakareba sei. Naizvozvo, kana iwe uchifarira chero chazvo, usatambise nguva yakawanda uchifunga uye nekuiisa pane yako iPhone, iPad kana iPod Touch.
1 Numeri Uye Kuverenga Pakutanga Kudzidza Math Mitambo
2 Chinyorwa Mufananidzo - Chinja mavara kuita mufananidzo
3 Kuba Mapikicha
4 Bhokisi reMusangano - Zvinyorwa, Mabasa, uye Zvirongwa
5 Webhu Dhizaini Basics - HTML neCSS Code
6 Nguva Yekufunda
7 Z Gamba
8 Super Tank Hondo
9 Zombies dzaSatani
Numeri Uye Kuverenga Pakutanga Kudzidza Math Mitambo
«Numeri Uye Kuverenga» mutambo wekudzidzisa wakagadzirwa zvevakomana nevasikana vanosvika makore mashanu yezera rinozovaswededza padyo nenyika yemasvomhu uye yavo yekutanga kuverenga maitiro mune yakapusa uye inonakidza nzira.
Iyi Anwendung ine mutengo wenguva dzose we 3,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
Chinyorwa Mufananidzo - Chinja mavara kuita mufananidzo
Musoro weichi chishandiso unosiya nzvimbo diki yekufungidzira, saka iwe unenge watofungidzira kuti chako chinoshandiswa chii. Kunyangwe zvakadaro, zvakandiomera kuti ndinzwisise kukura kwayo, zvichave kuti ini handisi pakunaka kwangu. Asi sezvo iri yemahara, tiri kuenda kurodhaunira uye ipapo tichaona zvatinoita neizvi chinja mavara kuita mufananidzoKunyangwe izvozvi zvandiri kufunga nezvazvo, kune iwo mameseji paTwitter taigona kuishandisa chaizvo.
"Mifananidzo Yemifananidzo" ine mutengo wenguva dzose we0,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
Bira mifananidzo "chikumbiro chicha shamisa shamwari dzako zhizha rose." Ini ndinofunga kudaro here kana iye anovandudza weiyi Anwendung kugadzirisa patsananguro yaro? Icho hunyengeri ndechekuti kana shamwari yako ichifunga kuti irikutora mufananidzo, arikutori pikicha yake asingazvizive. Handina kutaura! Asi zvidzitiro zvetsananguro yeapp hazvina basa. Magetsi: zero. Kufara: chakavanzika.
"Kuba mifananidzo" ine mutengo wenguva dzose we0,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
Bhokisi reMusangano - Zvinyorwa, Mabasa, uye Zvirongwa
Mune ino kesi isu takatarisana nechishandiso chakagadzirirwa avo vashandisi vanoda nyora manotsi. "Inoshanda kwazvo kune hurukuro, makosi ekoreji, misangano yebhizimusi, misangano yehofisi, utapi venhau, uye mune chero mamiriro ezvinhu aunoda kunyora kana kutora chimwe chinhu."
"Bhokisi rekusangana" rine mutengo wenguva dzose we2,99 euros asi ikozvino unogona kuzviwana mahara zvachose kwenguva yakati rebei.
Webhu Dhizaini Basics - HTML neCSS Code
Iyo kosi iyo iwe yaunodzidza nayo HTML neCSS padanho rekutanga, ehe, iwe unofanirwa kuziva Chirungu nekuti chinongowanikwa chete mumutauro uno.
Mutengo waro wenguva dzose we0,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
Nguva Yekufunda o «Yekudzidza nguva» chikumbiro chinobatsira vadzidzi kubata nguva yavo yekudzidza zvakanyanya. Iwe unozogona kucherechedza iyo nguva yawakapedza kudzidza, kana iwe wapedza yakawandisa nguva pachidzidzo chimwe asi iwe wakaregeredza chimwe, fungidzira uye ugovana kufambira mberi kwako, uye zvimwe zvakawanda.
Mutengo wakajairika we Nguva Yekufunda Iyo 0,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
Z Gamba ndiwo mutambo wakavakirwa pa "kurohwa". Iwe unofanirwa kubaya pachiratidziri kuti uchinje nzira, svetuka maburi, kurwisa zvikara, zvichingodaro. Mutambo une michina yakapusa asi iri muropa nekuti inobata chete ndeyekuti unozviita panguva chaiyo.
Mutengo wakajairika we Z Gamba Iyo 0,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
Super Tank Hondo
"Super Tank Hondo" ine mutengo wenguva dzose we0,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
MuSatan Zombies iwe uchave uri wekupedzisira vakapona ve zombie apocalypsee kuyambuka guta ichiparadza isina kufa uye vanopikisa.
"Zombies dzaSatani" ine mutengo wenguva dzose we0,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Mitambo nemashandisirwo emahara kana kutengeswa kwenguva yakati wandei (Ndira 9)
Mhoroi, José Alfocea. Ndiri kunyora, nekuti ini ndoda kukurumidza chikumbiro chinondibvumidza kunyora izvo zviri pane yangu mini mini skrini. Angave mitambo kana chero chinhu. Chii chandingashandise kana kurodha pasi?
Mhoro Marlon. Ingobatanidza yako iPad kune Mac yako uye neTransTime iwe unogona kunyora chidzitiro chePad yako
Google Calendar inobatanidza pamwe nehutano hwekushandisa kwe iPhone yedu
Apple inoda kupemberera Chinese Nyowani Nyowani nemari idzva iyi